Warqadda Varsity ee Adeegga Bulshada | Tonka Adeegaa
Waxaan ku dhiirigelin doonaa ardaydeena inay fahmaan una adeegaan waxa ugu weyn. Qorshaha Istiraatiijiyadeed ee Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Ardayda Dugsiga Sare ee Minnetonka waxay kasban karaan Warqad Varsity ah iyagoo la kulma shuruudo gaar ah oo ku saabsan aagga adeegga bulshada.
Ardayda dhigata fasalada 9 - 12 waxay xaq u leeyihiin inay codsadaan waxayna kasban karaan warqad sanad walba.
Shuruudaha xarafka Varsity:
150 saacadood oo aan mushahar lahayn, oo tabaruc ah ayaa lagu dhammaystiray 12 bilood kasta oo ka bilaabanta xagaaga kahor fasalka 9aad. Ugu yaraan 75 saacadood waa in lagu dhammeeyaa iyadoo loo marayo hal hay'ad ama hal sabab si loo hubiyo fahamka iyo ballanqaadka joogtada ah ee arrimaha bulshada ee la xushay oo adiga shaqsi ahaan adiga kugu habboon, tusaale hoy la'aanta, daryeelka waayeelka, saboolnimada, akhris-qorista, deegaanka, daryeelka caafimaadka.
Diiwaanka dhammaan saacadaha adeegga ee ay xaqiijiyeen kormeeraha qaangaarka ah ama waalidku.
Laba warqadood oo talo bixin ah oo ka socda ururada ama dadka loo adeegay oo tilmaamaya adeeggaaga, iyo waxqabadkaaga.
Milicsi Mashruuc: Milicsiga qoran, joornaal, fiidiyow, hees, shaqo farshaxan, buugga carruurta, soo bandhigid, wareysi ay la yeelatay Ms. Johnson ama shaqo kale oo ku saleysan adeeggaaga joogtada ah ee hal hay'ad ama meel u baahan.
Waa inaad uqalanto aqoon ahaan (2.0 ama ka sareysa GPA) iyo kiimiko la'aan inta lagu jiro sanadka si aad ugaqeyb gasho barnaamijkaan.
Sideen u duubtaa Saacadaha Adeegga Bulshada?
Isticmaal Waraaqda Varsity ee Adeegga Tabaruca AMA Abaalmarinta Adeeg Tabaruca Madaxweynaha warqadda raadraaca.
Dhammaan saacadaha mutaddawacnimada ah ee la diiwaangeliyey waa in ay caddeeyaan hay'adda lagu qabanayo adeegga, ama waalid ama kormeeraha qaangaarka ah.
Waraaqaha Talo soo jeedinta
Ka hel laba warqadood oo talo bixin ah hay'adaha ama shaqsiyaadka aad u adeegtay.
Ujeeddada Mashruuca Milicsiga waa in lagu muujiyo fahamkaaga hay'adda ama arrinta xiisaha leh adoo ka jawaabaya su'aalaha soo socda:
Muxuu yahay urur, baahi ama arin la xushay maxaadse ku dooratay?
Maxay arrintani u jirtaa yaase saameyn ku leh?
Yay yihiin hay'adaha dawliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee ka shaqeeya arrintan iyo waxa laga qabanayo si wax looga qabto? Sidee ayey u guuleysanayaan maxaase xaddidan?
Maxaad filaysay inaad la kulanto ka hor intaadan bilaabin tabarucidda aaggan iyo sidee ayay waxyaabaha aad ka fileysaa uga duwan yihiin khibradahaaga dhabta ah?
Sidee u adeegtay? Sharax fikirkaaga iyo dareenkaaga waqtiyada gaarka ah sida aad ugu adeegtay.
Ma jireen arrimo anshax oo aad la kulantay?
Waa maxay xirfadaha cusub, aqoonta iyo / ama fahamka aad heshay?
Waxaa lagugu dhiiri gelinayaa inaad laxariirto Sarah Johnson emayl ahaan sarah.johnson@minnetonkaschools.org ama wac taleefanka 952-401-5766 hadaad su'aalo qabto ama aad rabto inaad dib u eegto milicsigaaga kahor intaadan gudbin.
Ayaa ka qayb geli kara?
Xagee iskaa wax u qabso ku qaban karaa?
Sidee saacado loogu qaadaa tabaruce safar socdaal, lataliye deegaan ama fasax iskaa wax u qabso ah?
Ma tirin karaa saacadaha kulamada naadiga?
Miyaan tirin karaa saacadaha tabaruceyaashayda xagga Varsity Letter iyo abaalmarino kale oo iskaa wax u qabso ah sida Abaalmarinta Adeegga Tabaruca ee Madaxweynaha?
Maxaa kale oo aan la tirin karin?
Sideen wax badan uga baran karaa?
Dhammaan ardayda Dugsiga Sare ee Minnetonka waxay dhigtaan fasallada 9–12.
Waxaa jira siyaabo badan oo tabaruca bulshadaada loo maro iskuulka, isbitaalada, bulshooyinka caqiidada, wakaaladaha aan macaash doonka ahayn, xarumaha daryeelka waayeelka, jardiinooyinka, iwm. Ku soo biir Kooxda Tonka Serves Schoology (Code- 4BKFD-7QB38) si aad u hesho cusbooneysiin joogto ah oo ku saabsan fursadaha aad u adeegayso ama booqo www.TonkaServes.org oo guji meesha "Aagga Baahida" si aad wax badan uga ogaato la-hawlgalayaashayada adeegga.
Tabaruceyaashu waxay tirin karaan illaa 8 saacadood maalintii safarada howlgalka, la talinta kaamka ama fasaxyada tabaruca. Haddii aad hayso dukumeenti cadeynaya inaad shaqeysay in ka badan saacadahaan waad soo gudbin kartaa.
Haddii aad kaqeyb gasho naadi iskuul, koox dhalinyaro ah, indha indheeyayaal, iwm waxaad tirinkartaa saacadaha aad kubixisay kulamada abaabulka iyo fulinta mashruuc adeeg. Kaliya saacadaha lagu qaatay qorshaynta iyo kaqeybgalka mashruuc adeeg waxaa loo xisaabin doonaa saacado adeeg bulsho.
Haa, waxaad codsan kartaa saacado aad ku qaadatay tabaruc ahaan abaalmarino kale. Ma tirin kartid saacado aad ku qaadatay diyaarinta Mashruuca Milicsiga ee ku saabsan warqad Varsity ah ama Abaalmarinta Adeegga Tabaruca ee Madaxweynaha.
Saacadaha tabaruca ee khuseeya warqad kale oo Varsity ah, maareeyayaasha kooxda isboortiga, kaqeybgalayaasha masraxa ama bandhig faneedyada
Lacag bixin, qasab ah ama adeeg maxkamadeed oo maxkamaddu amartay.
Adeeg bulsho oo ku siinaya saacado amaah.
Lacag ururin waxtar kuu leh.
Waqtiga safarka ee looga baxayo ama laga imanayo howlaha adeegga.
Saacado aad seexatay intii lagu jiray safarada adeega habeenki ama xeryaha. Waxaad tirin kartaa sideed saacadood ugu badnaan maalintii ama waxaad keentaa dukumiinti aad in badan ka soo shaqeysay.
Leyliyo aan la bixin oo lala yeesho shirkado macaash doon ah.
Saacadaha lagu qaatay shirarka ama tababarka illaa aad qorsheyneyso ama aad kaqeyb qaadaneyso howlaha adeegga.
Shaqooyinka guriga ama u adeegida dadka ku nool gurigaaga.
La xiriir Sarah Johnson, Khabiirka Adeegga Bulshada: